Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPatrick
Isihlomelo, esi sitali sangaphambili sahlaziywa ngokupheleleyo kwi-2018 kwi-cottage efudumele kunye noyilo olulodwa olunomthamo wabantu abayi-2 ukuya kwabayi-8. Ifakwe kwisitayile somgangatho ophezulu, inazo zonke izixhobo zokuyenza ibe yindlwana etofotofo kunye netofotofo ngelixa ihlala inobuhlobo kakhulu. Izinto ezi-Eco-friendly ziye zagxininiswa ingqwalasela, ilitye lokuqala kunye neendonga zodongwe, i-OSB kunye ne-Ardennes imigangatho yefir, ifenitshala ye-pallet yomthi, ikhitshi yokhuni ehlaziyiweyo kunye nelitye lendalo.
I-cottage ikwilali ebukekayo yaseHalleux kwi +/- 6 km ukusuka kumbindi weLa Roche en Ardennes. Ngaphantsi kwemizuzu eli-15 ukusuka eDurbuy, iBaraque de Fraiture, Houffalize, Bastogne kunye ne-Ourthe. Kwi-390 m ngaphezu komphakamo wolwandle, yindawo yokuqala yobuninzi bokuhamba emahlathini, i-5 km ukusuka kwiindlela zokuhamba ze-skiing kwi-530 m ukuphakama kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kwi-ski slopes. ukusuka eLierneux.
Uyonwabela igadi entle ejonge emazantsi, kunye nethafa elinefenitshala yegadi yabantu abayi-8 kunye nebarbecue. Kwicala le-cottage i-petanque yobuchwephesha iqhuba kunye nendawo yokuhlala egadini. Kumgangatho wokuqala ojonge intlambo kunye necawe, indawo enkulu evulekileyo enegumbi lokuphumla kunye nesitovu esibaswa ngamaplanga, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kumgangatho ophantsi, amagumbi okulala ama-3 amahle kunye namagumbi amabini okuhlamba. Kumaqela amakhulu, kunokwenzeka ukuba ubhukishe isitena, esinomthamo opheleleyo wezindlu ezimbini zabantu abangama-25.
Uya kufumana izicwangciso ezineenkcukacha zoyilo kwiifoto, kunye nalo lonke ulwazi oluluncedo lokuhlala kwakho kwiwebhusayithi yethu iLa Grange de Halleux...
4.59 · Izimvo eziyi-56
Voila maintenant 10 ans, fort de notre expérience dans l'hôtellerie de luxe, que nous nous sommes lancés dans la location de gîtes. Avant tout nous voulons que ceux ci soient aussi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Roche-en-Ardenne